Qoyska Mucaaradsan Puntland | allsanaag
Qoyska Mucaaradsan Puntland
Aran jaan oo doonaya in Siyaasiga beesha Warsangeli Moohin laga keeno.
Kooxda Aran Jaan oo ka amar qaata Qoyska reer Faroole, oo dhibka iyo khal khalka siyaasadeed ay ku hayaan maamulka Puntland iyo hogaankeeda uu la mid tahay argagixiosada Alshabaab iyo abaarta ka jira Puntland, ayaa hadda bilaabay olole ka dhan ah gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali xaashi oo xilka ku haya ku wax wada qaybsiga ku salaysan beelihii Puntland wada samaystay.
Kooxda Aaran jaan ee ka amar qaata Qoyska reer Faroole ayaa si ay bulshada Ciise Mxamuud ee Majeerteen ee degaan ahaan ka soo jeeda Caasimadda Puntland ee Garowe u kiciyaan, waxay bilaabeen Borobogaanda ah in Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland uu xilligii Cade Muuse uu kula taliyey in Caasimadda Puntland laga qaado garowe oo si ku meel Gaar ah loo geeyo Boosaso. Sababtaasna waqtigaas looga qaaday Gudoonka Paarlamaanka
Qoraalada ay maanta Qoyska reer Faroole ay u qaybinayeen waxgaradka iyo dhjalinyarada Beesha Ciise Maxamuud waa kan
Madaxweyne Cabdiweli Maxamad Cali Gaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey safaro dibada ah kaga maqnaa Puntland ayaa wararka warsidaha Garowe Online ka helayo ilo lagu kalsoon yahay waxaa ay sheegayaan in lagula taliyey in muddada uga dhiman xilkiisa ku shaqeeyo magalaada Bossaso.
Xogtaan ayaa sheegeysa in soo jeedinta Axmad Cali Xaashi uu diidey madaxweyne ku xigeenka Puntland iyadoo muddooyinkii dambe uu xumaa xiriirka shaqo ee u dhexeeya labada mas’uul ee ugu sareeya Puntland.
← Agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Gaas xilka ha laga qaado →